Kugujwa olwamasiko eFrance | News24
Kugujwa olwamasiko eFrance
UKUGUBHA kuphinde kunandiswe ngenhloso yokubungaza usuku lwaMasiko (Heritage Day) indawo yaseFrance nayo ayisele ngaphandle njengoba imema wonke umphakathi ukuthi uphelele ngobuningi bawo ebumnandini balolu suku.
I-Happy Nation Productions izobe ihlanganise amaciko azobe eshiyelana inkundla ngoMgqibelo. Lapha kuphinde kumenywe bonke abanamakhono ahlukene ukuze banikezwe ithuba lokuba banandise futhi bazibeke ethubeni lokuhlomula umklomelo wenkulungwane yarandi (R1 000).
Konke lokhu kuzobe kwenzeka ehholo eMasakhane khona eFrance.
Okhulumela i-Happy Productions uSakhile Lombo uthe lokhu bakwenza ukuze nabo njengentsha nomphakathi waseFrance bakhombise ukuthi ukugubha amasiko kuyinto ebaluleke kakhulu.
“Simema bonke abanamakhono nalabo abafuna ukuzobukela futhi bagubhe nathi lolu suku olubaluleke kangaka. Kubalulekile ukuthi njengabantu abasha singasali ngaphandle kuzo zonke izinto nokuyinto esiyenzayo njengoba sizobe senze lo mcimbi,” kusho uLombo.
Amaqembu azoshiyelana inkundla uSgqebhezane, uGearbox, uSekbhe, Osomatekisi, Amajaji Amahle, uGovu nabanye.
Amaqembu ajoyina ngo R20, abazobukela abadala nabancane bangena ngo R5 kuphela. Amaqembu angabhalisa ngokushayela uSizwe Lombo kulezi 072 021 9232/ 061 342 9286